अरेबियन महिलाहरु किन यती सुन्दर र का’मुक हुन्छन् ? यस्तो छ रहस्य ! « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार २१:५५
सवैले स्विकारेका छन् कि, अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ । अरेबियन महिलाहरु ठुला आँखा र आकर्षक हेराइका कारण पनि प्रख्यात छन् । यी महिलाहरु धेरैजसो बुर्का भित्र रहन मन पराउँछन् । तर नकाबमा भित्रबाट देखिएको सुन्दर आँखाले नै उनीहरुको सुन्दरताको बयान गर्छ । अरेबियन महिलाको सुन्दरता प्राकृतिक मात्र नभएर आफ्नो छालाप्रतिको हेरचाह पनि प्रमुख कारण हो ।
धेरै कम महिलाले मात्र कठोर हेल्दी डाइट फलो गर्न सक्छौ । चिल्लो र स्वादिलो खाना देख्नासाथ हामी खान थालिहाल्छौ । तर अरेबियन महिलाहरु हेल्दी डाइट खाने गर्छन् । खानामा फलफूल र सागपात खाने गर्छन् । कपालको सुन्दरतामा बिशेष ध्यान दिने गर्छन् । आफ्नो कपाललाई सुन्दर र स्वथ्य बनाउनको लागि विशेष प्रकारको अरेबियन तेलको प्रयोग गर्छन् ।
काठमाडौ । वहुप्रतिक्षित जनकपुर–जयनगर रेल जनकपुरधाम आइपुगेका छन्। दुईवटा सेट शुक्रवार जनकपुर आइपुगेको हहो ।
नायिका एलिजा गौतम र नायक आकाश श्रेष्ठ अभिनित दशैं गीत को सुटिङ्ग सम्पन्न भए संगै